व्यक्तिगत व्यवहार | USAHello सांस्कृतिक स्रोतहरू | USAHello
व्यक्तिगत व्यवहार धेरै कुराहरू अर्थ. यसको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो हो कि विषयहरू समावेश. यो आफ्नो निजी जीवन अर्थ, तपाईंको बानी, र आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध. मान्छे अमेरिका आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कसरी व्यवहार गर्छन्? सफा रहन बारेमा जान्न, व्यक्तिगत सम्बन्ध, र लत.
सफा रहन अमेरिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ. सबैभन्दा अमेरिकी नुहाउनु वा हरेक दिन स्नान. तिनीहरूले बाल धुन आफ्नो शरीर र स्याम्पु धुन साबुन प्रयोग. आफ्नो नजर चमकदार बनाउन केही प्रयोग कंडीशनर. धेरै मानिसहरू व्यायाम दाँया पछि शवर. अमेरिकी पसिना को गन्ध मन छैन र त्यसैले तिनीहरू पसिना रोक्न आफ्नो underarms मा दुर्गन्ध राख्नु र Smells.
अमेरिकी साथै अक्सर आफ्नो लुगा धुनुपर्छ. अधिकांश मानिसहरू नै वस्त्र एक पंक्ति मा दुई दिन लगाउने छैन.
सफा घरमा अमेरिकी महत्त्वपूर्ण छन्, तर अधिकांश मानिसहरू हरेक दिन सफा छैन. जब अतिथि आउँदैछन्, तिनीहरूले घरहरू सफा र चिटिक्क हो भनेर पक्का. अमेरिकी सफाई तिनीहरूलाई मदत गर्न Dishwashers र वैक्यूम क्लीनर प्रयोग. जब उनि एक घर आउन सबैभन्दा अमेरिका आफ्नो जूता बन्द लिने छैन. केही गर्न, र तिनीहरूले चप्पल धारण गर्न सक्छ. तपाईं कसैको घरमा के निश्चित हो भने, यो सोध्न ठीक छ.
व्यक्तिगत सम्बन्ध र डेटिंग
डेटिंग रोमान्टिक तरिकामा कसैले समय खर्च छ. डेटिंग हो जो मानिसहरू सँगै कुराहरू के, यस्तो खाने जाँदै वा चलचित्र जाँदै रूपमा. तपाईं मिति मा कसैले लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ. यदि तिनीहरूले भन्न हो, तपाईं को दुई कहाँ जाने र के गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्.
त्यहाँ मिति कसैलाई फेला पार्न धेरै तरिकाहरू छन्. तपाईं साथीहरूले शुरू वा काममा कसैलाई भेट्न सकिन्छ. के तपाईं काममा कसैले तिथि भने, तपाईं आफ्नो नियोक्ता बताउन आवश्यक हुन सक्छ. स्मार्टफोनका डेटिंग अनुप्रयोगहरू जवान मान्छे संग अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्. तपाईं एउटा अनुप्रयोग डाउनलोड र मिति कसैलाई फेला रुचि राख्ने अन्य पूरा गर्न सक्छन्.
अमेरिकी तिनीहरूले तिथि छनौट. आमाबाबुको तिनीहरूलाई सल्लाह दिन सक्छ, तर तिनीहरूले मिति वा विवाह गर्ने निर्णय नगर्नुहोस्.
तिनीहरूले जवान हुँदा अमेरिका विवाह सबै गर्छन्. तिनीहरूले विवाह गर्न कसैले फेला पार्न अघि पुरुष र महिला धेरै मानिसहरू तिथि सक्छ. यो पुरानो मिति छोडपत्र वा साझेदार को मृत्यु पछि मान्छे को लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा साधारण पनि छ.
दुवै पुरुष र महिला घरको काम गर र संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु को हेरविचार. संग संयुक्त राज्य अमेरिका मा जब मानिसहरूले आधा बारेमा महिलाहरु. महिला अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका मा पुरुष भन्दा कम भुक्तानी गर्दै.
हरेक परिवार एक सानो बिट फरक छ. पुरानो मान्छे र हजुरबा हजुरआमाले धेरै कम अन्य देशहरूमा भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो परिवार संग बस्न सम्भावना. परिवार पनि कम बच्चाहरु छन्. संयुक्त राज्य अमेरिका मा केही मानिसहरू सबै छोराछोरीलाई छ रोज्न. ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू शहर मा मान्छे भन्दा बढी बच्चाहरु हुन सक्छ. तिनीहरूले अक्सर कम आधुनिक जीवन शैली छ, धेरै. तर पनि परम्परागत घरपरिवारमा, सबै भन्दा महिला काम.
धूम्रपान र सुर्ती चबाने
धूम्रपान कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा अनुमति छैन, बारहरू र रेस्टुरेन्ट सहित. तपाईं हुनुपर्छ 20 धूम्रपान गर्न टाढा खुट्टा सार्वजनिक भवन देखि. एक कार वा घर धुवाँ जस्तै Smells यदि सबैभन्दा अमेरिकी यसलाई रुचि छैन.
अमेरिकी धूम्रपान खतरनाक छ भनेर थाहा. तरल निकोटीन बाल्न भनेर इलेक्ट्रोनिक चुरोट लोकप्रिय छन्. तर तिनीहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्य को लागि लत र खराब छन्.
सुर्ती चिविङ अन्य भागहरु मा संयुक्त राज्य अमेरिका को केही भागहरु मा लोकप्रिय र असामान्य छ. यो जिब्रोको क्यान्सर हुन सक्छ, गिजा, र घाँटी. तपाईं हुन छ 18 सबै सुर्ती उत्पादन खरिद गर्न.
पिउने रक्सी पनि संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै साधारण छ, विशेष गरी सामाजिक परिस्थितिमा. अमेरिकी रक्सी पिउन, बियर, र रक्सी (यस्तो व्हिस्की र वोदका रूपमा पेय). तपाईं रक्सी पिउन चाहनुहुन्छ भने, कुनै भन्न वा पानी को लागि अनुरोध गर्न यो ठीक छ. अधिकांश मानिसहरू दुखी हुने छैन वा तपाईंले दबाब. यदि तिनीहरूले के, फेरि कुनै भद्रताका साथ भन्न.
तपाईं पिउने वा लागूपदार्थको प्रयोग गर्दा ड्राइभिङ खतरनाक र अवैध छ. तपाईं समातिए भने, तिमी जेल जाने. तपाईं पनि वकिल र तिर्ने जरिवाना मा डलर हजारौं खर्च हुनेछ. तपाईं प्राप्त आफ्नो लाइसेन्स लगिएको हुनेछ. तपाईं पनि काम आवेदन संग समस्या हुन सक्छ.
अमेरिकामा, अवधि लागूपदार्थ साथै औषधीको अवैध लागूऔषधको अर्थ. माथि-द-काउन्टर कानुनी औषधीको तपाईं चिकित्सकको निर्धारण बिना खरिद गर्न सक्नुहुन्छ छन् लागूपदार्थ छन्. दबाइहरु औषधीको तपाईं एक बिना किन्न सक्दैन छन् चिकित्सा निर्धारण. तपाईं कसैसँग दबाइहरु साझा हुँदैन. निर्धारण औषधीको आफ्नो डाक्टर निर्धारित छैन भनेर लिएर पनि अवैध छ. लागूपदार्थ प्रयोग गरेर आफ्नो शरीर दुख्छ र प्रहरी संग समस्या तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्.
गाँजा (पनि पट वा तान्नु भनिन्छ) केही राज्य अमेरिका मा कानुनी हो भनेर दबाइ को एक प्रकार छ. यो मान्छे धूम्रपान वा खान एक बिरूवा छ. केही मानिसहरू यसलाई स्वास्थ्य समस्या मद्दत गर्न प्रयोग. अन्य बाटो मान्छे रक्सी पिउन प्रयोग: तिनीहरूले प्रभाव चाहनुहुन्छ किनभने यो छ. हरेक राज्य गाँजा बारेमा विभिन्न नियम छ. केही राज्य अमेरिका मा, तपाईं यसलाई प्रयोग जेल जान सक्नुहुन्छ. अरूलाई मा, यो छ गाँजा प्रयोग गर्न कानुनी.
रक्सी र लागु पदार्थको लत
रक्सी र लागु पदार्थको लत संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक धेरै गम्भीर समस्या छ. लत तपाईं धूम्रपान रोक्न सक्दैन अर्थ, पिउने, र लागूपदार्थ प्रयोग, तपाईं चाहनुहुन्छ वा यदि तिनीहरूले तपाईंलाई बिरामी गर्दै भने पनि. तपाईं काममा समस्या छ पैदा गर्ने लत तपाईंलाई मनपर्ने मान्छे चोट छ वा महसुस हुन सक्छ. रोक्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ, तर तपाईं मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. फोन निःशुल्क सल्लाह प्राप्त गर्न, कल गर्ने राष्ट्रिय तत्त्वको दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन. तिमी सक्छौ पनि खोजी FindHello तपाईं नजिकै मदतको लागि. तपाईंको स्थान वा ठेगाना प्रविष्ट. त्यसपछि चयन “स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य” निःशुल्क र कम लागत मानसिक स्वास्थ्य र लत स्रोतहरू खोज्न.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा परिवार भूमिकाको
यौन स्वास्थ्य र स्वस्थ सम्बन्ध
संयुक्त राज्य अमेरिका मा संचार